Esi sisixhobo esibukekayo seMicrosoft smart thermostat | Iindaba zeGajethi
Esi sisixhobo esibukekayo seMicrosoft smart thermostat
Kwiminyaka embalwa, i-thermostats yenkampani yeNest, eyathengwa nguGoogle kwiminyaka embalwa eyadlulayo, yaba ngumgangatho wokuyilwa kunye nokusebenza kolu hlobo lwesixhobo. Kodwa ukusukela ngoku, uninzi luye lwabavelisi abasungula izixhobo ezifanayo, izixhobo ezingazange zigqame kuyilo, Inqaku lokuqala abathengi beli hlobo lefowuni bahlala bethathela ingqalelo.
Abafana baseRedmond babambisene ne-Johnson Control firm ukwenza i-thermostat entsha ye-smart, ithermostat ethi, ukongeza ekubeni mhle kakhulu, unomncedisi onyanisekileyo uCortanaNgaphandle kokuxhomekeka kubantu besithathu ukunxibelelana naye, inzuzo xa uthelekisa, umzekelo neNest, nangona ingeyiyo yodwa.
Ngaphakathi kule thermostat iselubala ebhaptiziweyo enegama elithi GLAS, sifumana Windows 10 Inkqubo yokusebenza ye-IoT Core, evumela ulawulo lwayo ukuba lubulele uCortana ngokusebenzisa imiyalelo yelizwi. I-thermostat ye-GLAS ayinakho ukusibonisa ubushushu begumbi kunye nokulawula kuphela, kodwa ikwasivumela fumana ulwazi kumgangatho womoya, ubushushu bangaphandle, ukusetyenziswa kwamandla ... Ngokufanelekileyo imisebenzi efanayo nesinikwa yi-thermostat yeNest, ireferensi kwintengiso.
Eli linyathelo lokuqala likaMicrosoft kwihlabathi le-Intanethi lezinto, icandelo ebelikhula kwiminyaka yakutshanje kwaye Kancinci kancinci iyakuba yinto eqhelekileyo emakhayeni ezigidi zabantu. Windows 10 IoT ikwafumaneka kwezinye iimodeli zeefriji ezivela kumenzi waseKorea LG, iifriji esinokuthi sinxibelelane ngazo enkosi kuCortana. I-GLAS ikwadityaniswa neenkonzo zeLifu zikaMicrosoft zeMicrosoft Azure, inkonzo yelifu efumene inani elikhulu labathengi kule minyaka idlulileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Esi sisixhobo esibukekayo seMicrosoft smart thermostat